Tag: mgbasa ozi ala Martech Zone
Tag: Mgbasa ozi ala
Ịgụ Oge: 3 nkeji Mgbe ụfọdụ, anyị na-echefu otu miri anyị si azụ ahịa ma chefuo inye mmadụ mmeghe nke usoro okwu eji eme okwu ma ọ bụ mkpirisi nke na-ese n'elu ka anyị na-ekwu maka ịre ahịa n'ịntanetị. Kechioma n'ihi na ị, Wrike ka tinye ọnụ a Online Marketing 101 infographic na-ejegharị gị site na niile nke bụ isi ahịa teminoloji mkpa ka gị na a mkparịta ụka gị ahịa ọkachamara. Mgbakwunye ahia - Chọta ndị mmekọ na mpụga iji zụọ ahịa gị
Ịgụ Oge: 4 nkeji Ahịa ọdịnaya dị ebe niile ma ọ na-esiwanye ike ịme ka atụmanya gaa ndị ahịa oge a. Azụmaahịa a na - ahụkarị enweghị ike nweta ihe ọ bụla site na usoro nkwalite akwụ ụgwọ, mana ọ nwere ike ịme nke ọma ịmatakwu ma mee ka ego nweta ego site na iji mgbasa ozi nke obodo. Nke a abụghị echiche ọhụrụ na mpaghara ịntanetị, mana ọtụtụ ụdị ka na-ada erigbu ya n'ụzọ zuru oke. Ha na-emehie di uku dika mgbasa ozi nke ala na-egosi na o bu otu
Ịgụ Oge: 2 nkeji Chọta ngwa ọrụ nkwado ziri ezi nke na - abughi naanị na - ege ntị ma na - eme njikọ na ndị na - ekiri bụ ihe siri ike. N'ime afọ ole na ole gara aga, ndị ahịa na-elekwasị anya na okwu a, na-anwale ma na-etinye ego na ụzọ dị iche iche iji hụ nke kachasị arụ ọrụ. O juru onye ọ bụla anya, ịzụ ahịa ọdịnaya nwere nọmba mbụ na ụwa nke mgbasa ozi. Ọtụtụ na-eche na ahịa ọdịnaya dị naanị maka mmadụ ole na ole gara aga
Tọzdee, Nọvemba 15, 2018 Sunday, November 18, 2018 Samantha Gilbert
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ọ bụrụ na ị na-ere ahịa ngwaahịa gị ogologo oge na-enweghị obere ụzọ nsonaazụ dị mma, mgbe ahụ ọ ga-abụ na oge eruola ka ị lelere mgbasa ozi ala dị ka ihe ga-adịgide adịgide nye nsogbu gị. Mgbasa ozi ndị amaala ga - enyere gị aka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na - eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị ugbu a yana ịchụ ndị ọrụ ezubere iche na ọdịnaya gị. Ma, ka anyị buru ụzọ mata ihe mgbasa ozi ala anyị tupu anyị echee otu anyị ga-esi.
Ịgụ Oge: 4 nkeji Dịka e kwuru na mbụ na Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Amamịghe echiche na mmetụta ya na PPC, Native, na Ngosiputa Ngosipụta, nke a bụ akụkụ abụọ nke isiokwu na-elekwasị anya na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ọgụgụ isi na mgbasa ozi ala. Ejiri m ọtụtụ ọnwa gara aga na-eduzi ọtụtụ nyocha na mpaghara ndị a kpọmkwem nke mechara banye mbipụta nke akwụkwọ ọgụgụ abụọ n'efu. Nke mbu, Ihe obula ichoro ima banyere ihe nyocha na ahia ahia,
1 2 3 Ọzọ →